TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA ARY ANTSIKA INDRAY AMBOHITSOROHITRA – MyDago.com aime Madagascar
Taorian’ny fifidianana ho filohampirenena notanterahana omaly dia niverina namonjy ny kianjan’ny Magro Behoririka indray androany ny mpomba ny filoha Ravalomanana rehefa niato kely tao anatin’ny roa andro. Vahoaka marobe no tonga teny an-toerana niandry ny lahateny nataon’ireo mpitarika mahakasika ny raharaham-pirenena. Tonga teny ihany koa ny kandida Robinson, niaraka tamin’ireo mpikambana ao anatin’ny movansy Ravalomanana. Ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy raha nandray fitenenana dia nanambara fa nandalo fotoantsarotra isika teto amin’ny kianja, teny Ambohijatovo, Akorondrano. Mitondra ny fialantsin’i Neny ihany koa ny tenako hoy izy fa naniry dia naniry izy ny hiaraka amintsika androany amin’ity andrompandresena lehibe ity. Fantatsika ny zavadehibe nataony Neny tamin’ny fampielezankevitry Robinson fa ho avy eto izy amin’ny manaraka. Marina hoy izy fa mbola tsy nivoaka ny vokatra ofisialy nefa nody ventiny ny rano natsakaina, horaisintsika ny fahefana atsy ho atsy, esorintsika ny mpanongam-panjakana. Ny maha samihafa antsika hoyizy dia isika zanak’i dada sy Neny nampianarina tamin’nyfomba kristiana, tsy mba manao valifaty izany isika. Miantso ireo namana rehetra hoy Mamy manerana ny Nosy hiaraka amin’ny Robinson, tongava fa vonona handray anareo izahay. Mbola betsaka ny zavatra harenina eto amin’ny firenena, betsaka ny tsy mety teto noravana nandritra ny dimy taona. Tsy manao ampo isika hoy izy fa tsy hay adinoina ireny zavatra ireny fa samy mitady Madagasikara vaovao lmahafinaritra iska rehetra. Ndao hiaraka hisikimponitra amin’i Robinson. Isika hoy Mamy tsy nangalabato fa raha misy ny 2eme tour dia vonona isika amin’izay tsy misy intsony ny 33 fa voalohany sy faharoa no misy. Tsy maintsy mivoaka mandresy isika, matoky anareo izahay ry vahoaka. Mbola hifampidinika amin’ny Ceni-T isika hoy izy fa maro loatra ireo namantsika tsy afaka nifidy, ka tokony asiana fanamboarana ny karam-pifidianana ka nohoizany dia miomana dienyizao isika. Ny dokotera Robinson kosa dia nisaotra ny vahoaka manerana ny nosy izy tamin’ny nifidianana azy, ny filoha Ravalomanana., fantatry ny vahoaka hoy izy fa mila faranana ny krizy, vita hatreo ny tetezamita ary bye bye ny foza. Dimy taona andrinay hoy izy ka raha 2eme tour mbola iandrasana. Ny firaisankina hoy izy no ataoko voalohany dia miverina eto ny filoha Ravalomanana. Isika hoy izy tsy maintsy mandresy ary antsika indray Ambohitsorohitra.
11 réflexions sur « TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA ARY ANTSIKA INDRAY AMBOHITSOROHITRA »
26 octobre 2013 à 17 h 24 min
Andriamanitra anie homba antsika rehetra hatrany hatrany fa tsy tokony hivaky loha izany intsony isika satria na dia eo aza ny valim-pifidianana vonjy maika, isika tsy ho taitra fa Andriamanitra manana ny teny farany ary tsy hanary ny olony ka tokony hatoky azy foana isika. MISAOTRA TOMPO FA RAHA TSY TEO IANAO, TSY TONGA AMIN’IZAO IZAHAY FA MBOLA MANANTENA ANAO FOANA.
Aoka tsy ho variana, hamafiso ny fanarenana izay lesoka, mila jerena maika sy haingana ireo toerana maro voalaza atsy amin’ny TNN fa tsy misy délégués!??
Aoka tsy ho mandrimandry isika! Aoka isika tsy hisioka fa mbola tsy tafavoaka ny ala!
« FA, TSY MAINTSY TAFAVOAKA NO TANJONA »
26 octobre 2013 à 17 h 42 min
Ao ve ry Neninoro ô ?
Tsy ny délégués no tsy misy fa ny mpanentana no varindriana, manantena ny hitango fotsiny fa tsy hisasatra ny sasany ê !
Andron’ny firaisankina izao, sy fanarenana ny lesoka araky ny voalazanao !
Fa asa ny be loha sasany rahatoa ka hanoy ny adalàny ?
26 octobre 2013 à 17 h 59 min
EDITION COMPLETE (Misy ampahan’ny fandaharana tsy tafiditra tao anatin’ny oronam-peo …): 25.10.2013 – Rindra kevitra – Fanampi-mbaovao: Raha hisy ny fiodinana faharoa amin‘ny fifidianana Filohampirenena, ISIKA dia tsy MIFIDY ho député IZAY tsy manohana an‘i Dr.JLR !!!
26 octobre 2013 à 20 h 41 min
Eo ihany aho ary eny foana ry Kintana ô!
Raha mbola velon’aina koa dia tsy maintsy mijoro, ary tsy hangina n’aiza n’aiza eo anatrehan’ny ady amin’ny tsy fahamarinana hanesorana itony mpangala-pahefana, sy mpivarotra tanindrazana itony eeeee!!
Tena henatra sy fanetri-be hoan’ny firenena!!!
Tsy mihemotra ary tsy hihemotra, no sady tsy mataho-masomena!!
ny delegue tokony hamafisina ,ny mpifidy tsy afaka nifidy teo tokony karakaraina ,nisy ohatra taty tamatave mpifidy fantatra fa hifidy Dr ,izy iray trano tonga de tsy afaka nifidy
_ny sasany indray tsy fantatra marina hoe aiza ny birao pifidianana
fa ny delegues averiko indray fa tokony hampiana ,atao rakotra ny biraom_pifidianana rehetra satria i Guy RIVO mihintsy no nanambara fa 60% ihany no misy delegue antsika.
Manaraka izany dia tokony hampanginina le gena be Fatima fa miteniteny foana ,izy indray no mametraka fa tsy misy mahazo mifidy izay tsy ao anaty liste 1er tour,fa iza izy manome fo an,
koa mino aho ,isika jiaby mihintsy fa tokony ho jeren’ny Zanak’i DADA sy ny AVANA ireo an
TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA AN
Fa mba nankaiza daholo ary ireo nilaza ho mpitolona teo e ???!
?isy mody misisika any @ Botozaza indray angamba, Mikendry ny ho PM indray ny sasany an ?! ??? Sao mba variana any @ FB any ary !
Aiza ianao Atoa Jean Louis RAKOTOAMBOA o ? Jean Louis R. ihany ity e : TOHIZO NY TOLONA FA MBOLA TSY VITA.
Tsy handresy isika raha mbolany 60% ny biraom-pifidianana no misy ny solon-tenatsika. Ny fanaraha-masi ity vokam-pifidianana fihodinana voalohany ity aloha no himasohana fa feno halatra be ilay Fery vaovao sy AVC. Aorian’ny filazana ny vokam-pifidiana ofisialy vao mijery ny manaraka.
Faharoa, ny any @ faritra dia mbola tsy hita mihitsy i JLR ka mila atao lesona iy fiodinana voalohany iny. Mahajanga sy Toliary dia mila jerena tsara fa izy ireo anie ka tsy nahita afa-tsy ny HAT t@ TVM isan’andro e.
Farany, Tsy mbola nandresy isika, satria tsy » premier tour de vita » ilay izy. Ny FAT sy ny frantsay dia mamboatra ny rehetra mba handres’i Fery vaovao. Any @ lafiny tekinika no misy ny halatra. Tokony hijery ny Logiciel hampiasan’ny CENIT ny ankolafy Ravalomanana. Ary ny Zanak’i Dada rehetra dia samy tokony hanaramaso , ny rehetra, na ity vokam-pifidianana ity na ny fihodinanana faharoa.
Ary mba aiza ny video misy ny HAFATRY ny Filoha Ravalomanana ê !
27 octobre 2013 à 13 h 41 min
Hafatra ho antsika miaraka aminy robinson ravalomanana
Aza mbola misiaka aloha raha tsy tafavoaka ny ala.
Tsy izany mantsy fa ny mouvance Ravalomanana dia tsy mandrakotra manontolo any i Madagasikara fa 60 isan-jatony fotsiny, fantatrareo angamba ny tiako lazana ary ny foza dia fantatrareo ihany ny toetrany.Manarakizany aiza aminizay ilay vavany i Rajoelina milaza woe:mamin’Antananarivo.Asaivo
jerevany ny tabilao.
Tsy afaka misioka izahay rasamy satria ny vavanay aza mbaola misanasàna !
Mivanàka, ary tampenana fotsiny sao dia tafiditry ny lalitra ! Mbô kôzy ê
Ny sasany variana manao apprenti(e) chanteur sy chanteuse !
Ny délégués hoy ny sasany no tsy mandrakotra ; ny vahoaka tia tanindraza sy tan-dalàna mbola sahirana mitady ny lalan-kivoahana satria tsy misy manoro !!!
Précédent Article précédent : Fisaorana avy amin’ny Dr Robinson Jean-Louis
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA : Tsy ho vita ny tolona raha tsy tonga aty i Dada